रङ् ---LISH, हिङ् --- LISH, नेङ्----LISH | कृष्ण प्रधान
रङ् ---LISH, हिङ् --- LISH, नेङ्----LISH
हास्यव्यङ्ग्य कृष्ण प्रधान January 9, 2022, 8:50 pm
"चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी ।"
अर्थात् (पानीको स्वाद प्रत्येक चौथो कोसमा केही मात्रामा बद्लिन्छ अनि आठ कोसमा केही न केही मात्रामा भाषा परिवर्तन हुँदछ) ।
उपर्युक्त लोकोक्तिलाई रूपियाँमा सोह्रै आना सही ठहऱ्याउँदै के थप गर्न आवश्यक भएको छ भने, हजारौं कोस टाढ़ाबाट एउटा ज्यूँदोजाग्दो भाषा बसाइँ सर्दै आएपछि सो भाषा परिवर्तन हुनु मात्र होइन त्यसले आफ्नो पैतृक हिज्जे, शब्द, वाक्य समेत काँचुली फेर्दोरहेछ । खासै कुरो भन्नु हो भने, अङ्ग्रेजी भाषालाई संसारभरिकै प्रमुख भाषा मानिन्छ । संसारभरि नै प्रमुख मानिने प्रमुख भाषालाई कुखुरा भुत्ल्याएजस्तै भुत्लाएर नाङ्गोझार पारिसकेको देखिन्छ यो साइबर र इण्टरनेट युगमा । ईङ्गल्याण्ड, अमेरका, अष्ट्रेलियाबाहेक पनि एशिया-अफ्रिका महादेशका करोड़ौं-करोड़ौं मानिसहरुले अङ्ग्रेजी भाषालाई आ-आफ्नै पाराले व्यवहार गरेको देखिन्छ हिजोआज । अङ्ग्रेजी भाषाले अब आवश्यकतानुसार नयाँ रूप, नयाँ रङ्ग लिएर बाँच्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । प्रयोगको माध्यमले भाषा बद्लिन्छ ।
अहिलेको संसारमा कुनै पनि भाषा अभ्यास गर्ने ठूलो मैदान हो इण्टरनेट । "नेट"-भरिनै व्यापक मात्रामा अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषाको मिश्रणस्वरूप बनिएको 'हिङ्लिस' भाषाले राँटो लाइसकेको देखिँदोछ । सन् 2004 मै भाषाविद् डेभिड क्रिष्टोलले भनेका थिए - "पैंतीस करोड़ भारतीयहरू 'हिङ्लिस' बोल्छन् ।" अहिलेसम्ममा 'हिङ्लिस' बोल्नेहरूका सङ्ख्या दिन दुइगुणा रात चौगुणा बढ़िसक्नु यथार्थ सत्य हो । कम्ति हुने ता कुरै आउँदैन । एउटा सिङ्गो, विशुद्ध अनि अन्तरराष्ट्रिय भाषाको पगरी गुँथ्ने अङ्ग्रेजी भाषाले 'हिङ्लिस' भाषामा काँचुली फेर्नमा इण्टरनेटकै करामति हो भन्ने कुरो छाती ठोकेरै घोषणा गर्न सकिन्छ । च्याट रूममा युवा-युवतीहरूले टाइम पास गर्ने भाषालाई व्याकरणको हाउगुजीले केही असर पार्दैन ।
'हिङ्लिस' प्रसङ्गमा कुरा गर्नुपर्दा, पेप्सीको विज्ञापनमा केही वर्ष अघि 'ये दिल मागे मोर' भन्ने स्लोगान (नारा?) खूबै प्रचलित भएको थियो । आफ्नो उत्पादन व्यापक मात्रामा प्रचार र खपतको निम्ति पेप्सीले अन्तरराष्ट्रिय स्लोगान तयार पारेको थियो - 'Ask for more' । यही 'Ask for more'-लाई " नै 'हिङ्लिस'-को बर्को ओढ़ाएर 'ये दिल मागे मोर' स्लोगान तयार पारियो । यो 'ये दिल मागे more' भन्ने स्लोगान बूढ़ाबूढ़ीदेखि भुराभुरीसम्मकै ओंठ-ओंठमा झुण्डिनु मात्र होइन तर राष्ट्रिय गीतजस्तै भट्याउन थालिएको थियो । अङ्ग्रेजी स्लोगान 'Ask for more'-मा एउटा विनम्र आदेश पाइए तापनि गाहकीको मनमा भने कुनै आकर्षण देखिएन । सोझै भन्नु हो भने, उक्त स्लोगानले गाहकीको परिधिमा त्यति ख्याति पाउन सकेन । तर 'हिङ्लिस' स्लोगान 'ये दिल मागे more'-मा गाहकी हुरूक्कै र भुतुक्कै हुने आकर्षण छैन र ? गाहकीलाई आफन्त बनाउन भाषा भत्कोस् कि नासोस् के खाँचो ?
वर्तमान विश्व बजारको मूल उद्देश्य र लक्ष्य नै हो, विश्व बजारभरि नै उत्पादित वस्तु छर्नु । नाफा कमाउनु । साधारणभन्दा साधारण मानिसलाई गाहकीकै रूपमा हेर्नु । यसकारण गाहकीलाई आकर्षित पार्नु र उनीहरूलाई नै मनपर्ने अर्काको शुद्ध भाषामा लोकल फ्लेभर हाली उत्पादित वस्तु बजारभरि खपत गराउने व्यापक होड़बाजी चलेको देखिन्छ । बर्गर-बिफको सट्टा तन्दुरी-चिकनले बजार हत्याउनैपर्छ । कुनै पनि गाहकीले हाम्रो पिउने पानी लिएर आफ्नै भाषामा 'चियर्स' भनी 'बटम अप्स' गर्छन् भने 'टप डाउन' व्याकरणको के खाँचो ?
अङ्ग्रेजी भाषा अब अङ्ग्रेजहरूको नियन्त्रणमा छैन भन्दा कुनै टुटा नपर्ला । हजारौं कोस टाढ़ाबाट बसाउँ सरिसकेको अङ्ग्रेजी भाषा गलत भनी नाक खुम्च्याउने दिन र समय गयो अब । दिन प्रतिदिन अङ्ग्रेजी भाषाले काँचुली फेरिरहेको छ । आ-आफ्नो आवश्यकता अनुसारले दार्जिलिङका वेटरदेखि लिएर नेपालका गाइड लगायत करोड़ौं-करोड़ौं मानिसहरू निंद्राबाट ब्यूँझिने बित्तिकै अङ्ग्रेजी भाषालाई निचोर-नाचार्. ङालाक्-ङिलिक्, न्याक्-झ्याक्, चिथोर-चाथार पारी आफ्नै पाराले बोलिरहेको पाइन्छ । निजी सुविधा अनुसारको वाक्य गठनको माध्यमद्वारा ढुक्कैले कसैको पर्वाह नै नगरी अङ्ग्रेजी फ्लेभर हाली रङ्लिस (WRONGLISH) प्रयोग गर्नेहरू भक्कचूर देखिनथालेका छन् । के को ग्रामर, के को डिक्स्नेरी ? सबै चल + able = चलेबल । "It is impossible" किन भनिरहनु पऱ्यो ? 'unpossible' भन्दा पनि चलिरहेकै छ ता । 'त्यो मान्छे साह्रै corrupt' छ किन भनिरहनु पऱ्यो र ! 'corrupted मान्छे' भन्दा पनि भएकै छ ता ! भन्नुको अर्थ आफ्नो काम बनियो भने रङ्लिस (WRONGLISH ?) व्यवहार गर्दा कुनै टुटा पर्ने होइन क्यारे । यसैकारण रङ्लिस (WRONGLISH ?) भाषाबारे यहाँ केही जानकारी गराउने धृष्टता गरिरहेछु -
साहित्य अकादमी (दिल्ली), नेपाली परामर्शमण्डलीको सदस्य भएको नाताले अकादमीको नेपाली परामर्शमण्डलीको एउटा आकस्मिक सभामा मैले शिलाङ पुग्नुपरेको थियो । शिलाङको पल्टन बजारकै एउटा विराट तीनतारे होटलमा हामीलाई बस्ने व्यवस्था गरेको थियो अकादमीले । सिरानको तलामा बियर बार रहेछ । ऐनाको दैलोमा ठूल्ठूला अक्षरमा लेखिएको थियो - CHILD BEAR AVAILABLE HERE । भित्र बारमा तरूणी-तन्नेरी लगायत बूढ़ाबू़ढ़ीहरू समेत मधुर सङ्गीत सुन्दै बियरपान गरिरहेका देखेर भन्दा पनि दैलामा CHILD BEAR लेखिएको शब्द देखेर दङ्गदाश परेँ म । CHILLED BEER को ठाउँमा CHILD BEAR ? ग्लासभरिको Chilled Beer लाई चुस्की लिँदै सङ्गीतको धुनमा रम्नुपर्ने हो कि Child Bear वा गद्दु (भालूको बच्चा) को मुखमा चुम्बन गर्नुपर्ने हो मैले केही बुझ्न सकिनँ । तर बियरपान गर्नेहरू, ट्रेमा भटाभट बियर ओसार्ने वेटरहरू वा क्यास बक्समा पैसा हाल्नेहरूलाई के को लुतो न कनाइ ? हिज्जे वा वाक्यलाई अर्थको अनर्थ पार्दा पनि तिनीहरूको व्यापार नकोरिँदा रहेछ ता !
सिलगढ़ी विधान मार्केटको एउटा पसलको साइनबोर्डमा यस्तो लेखिएको पाइन्छ - ALL KINDS OF SNAKES AVAILABLE HERE । तर उक्त पसलमा तपाईले थरि-थरिका साँपहरू मरिगए पनि पाउनुहुन्न । SNAKES लेखे पनि SNACKS लेखे पनि उक्त पसलमा साँप होइन SNACKS खाने र किन्नेहरूकै मात्र भीड़ देखिन्छ । हिज्जेसित कसलाई के को ऱ्याइँऱ्याइँ ! सब चल + ING = चलिङ ।
प्र्त्येक महिलाहरू स्याम्पो लाउँछन् । एकदिन एउटा दामी कम्पनीको स्याम्पू ल्याएर श्रीमतीले मलाई देखाइन् । स्याम्पूको बोतल वल्टाई-पल्टाई हेरेँ । लेखिएको थियो - Use repeteadly for severe damage । स्याम्पू कम्पनीका मालिकलाई कुनै damage भयो वा भएन सोबारे कुनै खबर यो लेख लेखिञ्जेल मैले पाएको छैन ।
सिलगढ़ीकै सेठ श्रीलाल मार्केट व्यस्त बजार हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । मेरी श्रीमती उनको सलवार-कुर्त्ता सिलाउन उक्त बजारमै जान्छिन् । माथ्लो तलामा लस्करै दर्जीका पसलहरू छन् । श्रीमतीसित उक्त दर्जीको पसलको सिँढ़ी चढ़दै थिएँ । सिँढ़ीकै मुखमा एउटा सूचनापटमा आँखा पुगि ता हाल्यो । लेखिएको थियो - KRISH TAILORS. Ledis, plese have fit upstairs । यो सूचना देखेर श्रीमतीमाथि कता कता पाप मन गइहाल्यो । मेरी श्रीमती दर्जीकहाँ उनको सलवार-कुर्त्ताको नाप दिन जान्छिन् कि having fit-को निम्ति जान्छिन् भन्ने एक राश शङ्काले मलाई कोपरिरह्यो तर उनलाई यसबारेमा केही सोध्ने आँट गरिनँ कारण मेरी श्रीमतीजस्तै बग्रेल्तै श्रीमती लगायत तरूणीहरू पनि तिनै दर्जी पसलमै भीड़ लाग्दा रहेछन् ।
दार्जिलिङको होटलमा प्रायः ठण्डा पानी दिनुपर्छ प्यासेञ्जरलाई । एउटा होटलको बाथरूमको दैलामा लेखिएको देखेँ - PLEASE PRESS MAID TWICE FOR HOT WATER । मेरी बास्सै ! रङ्लिश (WRONGLISH) ज्वलन्त उदाहरण । उक्त रङ्लिश (WRONGLISH) - कै मुन्तिर उपरोक्त वाक्यलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी अर्को सूचना टाँसिदिन मन लागेको थियो। तर उपद्रो गर्न मन लागेन ।
सिलगढ़ीको एउटा होटलको रिसेप्सनमा एउटा सूचना लेखिएको भेटेँ - PLEASE LEAVE YOUR VALUES AT THE RESEPTION । होटलको रिसेप्सनमा टाँगिएको सूचनाले values नभएर valuable भन्ने कुरो स्पष्ट बुझिन्छ । दामी-दामी वा मूल्यवान सामानहरू होटलको भल्टमा सुरश्रित राखी प्यासेञ्जरहरू ढुक्क होउन् भन्ने उद्देश्यमा उक्त सूचना लेखिएको हुनुपर्छ । भ्यालुजको अर्थ मूल्यबोध बुझिन्छ । उपरोक्त सूचनाको अर्थ मूल्यबोध रिसेप्सनमै छोड़िराख्ने बुझिन्छ होइन र ? शुद्घ अङ्ग्रेजीमा लेखिएको भए ? भूल होस् न कसले के गर्छ ? रङ्लिश (WRONGLISH) न हो, सबै चलिङ ।
चेन्नईको एउटा बारमा बड़ो अचम्म र उदेकलाग्दो सूचना पढ़्ने सौभाग्य जुऱ्यो मेरो । पर्यटकलाई आकर्षित पार्न बारको दैलाको मुखैमा लेखिएको थियो - YOU ARE WELCOME TO VISIT THE CEMETRY WHERE FAMOUS MUSICIAN, ARTISTS AND WRITERS ARE BURRIED DAILY EXCEPT SUNDAY । अङ्ग्रेजीमा लेखिएको यस सूचनालाई भावानुवाद गर्दा यस्तो देखिन्छ - "आइतबार बाहेक प्रतिदिन ख्यातिप्राप्त सङ्गीतकार, कलाकार अनि साहित्यकारहरूको दाह संस्कार गरिन्छ, तपाईहरूलाई स्वागत छ ।" यस्ता रङ्गलिश (WRONGLISH) ले पनि ठाउँ-ठाउँमा वास पाएको देख्दा अचम्म र उदेक लाग्छ ।
सिलगढ़ीकै एउटा ग्रील फ्याक्ट्रीको साइनबोर्डमा लेखिएको एउटा अंश - WIDOW, COLAP-C-BALL GATE MAN FRACTURE HERE । WINDOW लेखिनुपर्ने ठाउँमा WIDOW MANUFACTURE लेख्ने ठाउँमा MAN FRACTURE लेखिएको देखिन्छ । उक्त ग्रील फ्याक्ट्रीमा प्रतिदिन कतिजना स्वास्नीमान्छेहरू WIDOW बनिन आउँदा हुन् र कसरी सद्दे स्वास्नीमान्छेहरूWIDOW बनिँदा हुन् अनि कतिजना MAN हरूलाई प्रतिदिन FRACTURE पार्दा हुन् मलाई हेर्न मन लागिरहेको भए पनि उक्त फ्याक्ट्रीमा फलामको कामबाहेक WIDOW र FRACTURE बनाउने काम भएको अद्यावधि देखेको छैन मैले ।
कलकत्ताको न्यू मार्केटस्थित एउटा रेडिमेड कपड़ा पसलमा लेखिएको सूचना - DO NOT GO OTHER SHOP TO THE CHEATED, COME HERE । कत्ति सजिलो स्वीकारोक्ति । पसलका मालिकले आफ्नै पसलमा लेखिएको सूचनाको अर्थ जान्दछन् कि जान्दैनन् को नि (?) तर बुझ्नेहरू मुसुमुसु हाँस्दै अन्य पसलतिर लागेका दृश्य हेर्नु साह्रै मज्जाइलो देखिन्छ ।अङ्ग्रेजी भाषालाई कसले पो पत्तो दिन्छ र !
एउटा ए सी-को म्यानुलमा लेखिएको सतर्कवाणी - COOLES AND HEATS. IF YOU WANT JUST CONDITIONS OF WARM, JUST CONTROL YOURSELF । वाह ! कति खाँटी कुरा ! आफ्टर सेल्स एण्ड सर्भिसको युगमा पनि सामान खराब भइहालेको खण्डमा कम्पनीका मान्छेहरू नभेट्दा आफ्नो कण्ट्रोल ठीक राख्नुबाहेक अरू उपाय नै के छ र ?
उपरोक्त रङ्लिश () ले व्याकरणविद्, भाषाविद्हरू अग्निशर्मा भए पनि कसैको काममा वाधा आएको देखिएको छैनवा सुनिएको छैन । होटलमा प्यासेञ्जरहरूले तातो पानीको निम्ति MAID PRESSURE गर्छन्, महिलाहरू दर्जीको पसलमा HAVING FIT अनि हातमा बियरको ग्लास बोकेर मधुर सङ्गीतको धुनमा CHILD BEAR लाई चुम्बन गर्दै रात बिताउँछन् भने ग्रील फ्याक्ट्रीले WIDOW तयार पार्छ । जति नै रङ्गलिश (WRONGLISH) लेखिए पनि खै कसलाई टुटा पर्दोरहेछ र ! उपरोक्त रङ्लिश (WRONGLISH) भाषाहरू हेर्दा वा पढ़दा अचेल भाषाको मैदानमा कलम चलाउने दिन सिद्धिसकेको स्पष्टै देखिन्छ ।
विशुद्ध अङ्ग्रेजू भाषा हिङ्लिश (HINGLISH) हुँदै रङलिश (WRONGLISH) भएको उदाहरण हामीले हेरिहाल्यौं । भन्नु उसो होइन, एउटा शुद्घ वाक्यको अर्थ बिगारेर सूचनापट वा साइनबोर्डमा लेखिएको देखिए तापनि नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजी भाषाको फ्लेभर लगाई नेङ्लिश (NENGLISH) वाक्य प्रयोग गरी सूचनापट वा साइनबोर्ड लेखिएको कतै देखिएको भने छैन । नेपालतिर यस्तो लेखिएको छैन भन्ने कुरामा म साह्रै आना आश्वस्त र विश्वस्त छु । यद्यपि अङ्ग्रेजी भाषाको फ्लेभर लगाई नेङ्लिश () शब्दहरू मात्रै भने यदाकदा प्रयोग भएको देखिन्छ । केही उदाहरणहरु -
अङ्ग्रेजी नेपाली अङ्ग्रेजी + नेपाली = नेङ्लिश ( NENGLISH)
boot जुत्ता बुटजूत्ता
cap टोपी क्यापटोपी
catch समात्नु क्याच गर
longkick - लङ्की
van गाड़ी भ्यानगाड़ी
भारतमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रचार-प्रसार गर्नेहरूमा थोमस् ब्याबिङ्टन् मेकलेको नाउँ सिरानमै उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ । मेकलेले भनेका थिए - "भारतलाई शासन गर्नअङ्ग्रेज राजा र भारतीय प्रशासकहरूमाझ मध्यम श्रेणीको आवश्यकता छ जो रङग र रगतमा भारतीय हुनुपर्छ ।"
हामीलाई थाहा छ मेकलेको चो योजना सफल भएको थियो । भारतीयहरूलाई शासन गर्न शिक्षित भारतीय प्रशासक श्रेणी अङ्ग्रेजहरूले तयार पार्न सकेका थिए । ब्रिटिश राजनीतिविद् सर फिलिप फ्रान्सिसले पनि भारतवर्षमा अङ्ग्रेजहरूले व्यापार बढ़ाउने कुरामा जोर गरेको पाइन्छ । उनले भनेका थिए, "आफ्नो दुनो सोझ्याउन फ्रान्सेली भाषाको सट्टा अङ्ग्रेजी सिक्न भारतीयहरू वाध्य हुनेछन् ।"
मुगल वा इस्लामहरुको चुरीफुरी निमिट्यान्नै पार्न अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोगलाई एउटा हतियारकै रूपमा प्रयोग गर्न कम्मर कसेका थिए फ्रान्सिसले । जिल्ला-जिल्लामा तिनले अङ्ग्रेजी स्कूलहरू खोल्ने कुराहरू गरेाक थिए । ताकि केही वर्षभित्रमै एउटा यस्तो युवा प्रजन्म तयार होस् अनि प्रत्येकको ओंठ-ओंठमै अङ्ग्रेजी भाषा झुण्डिएको होस् । वास्वतमा त्यस्तै भयो पनि । साँच्चै फ्रान्सिसको जल्पना-कल्पनाले सफलता पायो । यसरी सफलता पाउनु नै अङ्ग्रेज र अङ्ग्रेजीको अनुशासनले बुर्कुसी मार्नु थियो । अङ्ग्रेजी शासन सबैलाई ग्रहण गराउनु नै मूल मनसाय थियो मेकले र फ्रान्सिस साहेबहरूको ।
यो परम्परा आजसम्म यथावतै छ । हाम्रो चारैतिर अङ्ग्रेजी माध्यमका स्कूलहरू झरीको च्याउजस्तै स्थापित भएको देखिन्छ। यता गर उता गर अङ्ग्रेजी माध्यमका स्कूलहरूकै जगजगी छ । तर एउटा अकाट्य सत्य कुरो के हो भने, अङ्ग्रेजी सिके नोकरी हत्याउन सुविधा हुन्छ । जुन भाषालाई मेकले वा फ्रान्सिसले ईङ्गल्याण्डको राज र व्यापार शक्ति भरतभूमिमा यथावत् राख्न प्रयोग गर्न खोजेका थिए. सो भाषाको मालिकपन अब अङ्ग्रेजहरूको वा ईङ्गल्याण्डको हातमा छँदैछैन ।
अह साहेबहरूको दिल छैन । त्यसैले सबैलाई POSTPONE गर्नको साटो PREPONE गर्नुपर्छ । PREPONE शब्द शब्दकोशमा छैन । के भो ता भारतीयहरूका हातमा पैसा आउँदैछ, हामीले उनीहरूको कम्पनी, फ्याक्ट्री किन्दैछौं भने हाम्रो हिसाबमा प्रयोग गरिने लाख, करोड़ शब्दहरू अङ्ग्रेजी भाषामा पस्ने नै छन् । अङ्ग्रेजीमै करोड़पति लेख्नेछौं, भन्नेछौं पनि । किन ट्रिलियनपति हुने ? बन्द, घेराऊ, डाँका शब्दहरू यथाक्रमले BADHA, GHEORAUED, DACOIT भई अङ्ग्रेजी भाषामा पोइल गइसकेका छन् भने सोही भावनालाई अनुवाद गरी अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गर्दा कुन पहाड़ भत्किने हो र ?
ठूल्ठूला शहरतिर कुनै घरको कोठा खालि भयो कि घर-मालिकले भाड़ावालको सूचनार्थ सबैले देख्ने गरी ठूल्ठला अश्ररमा TO LET लेखिएको सूचना घर बाहिर झुण्ड्याउँछन् । तर कतिपय घरतिर बाहिरपट्टी TO LET लेखिनुपर्ने ठाउँमा TOILET लेखिएको पाइन्छ । फेरि कतिपय पब्लिक शौचालयतिर TO LET लेखिएको पनि देखिँदोछ यदाकदा । पाँच हजार प्रति महिना पर्ने सुन्दर घरको अघिल्तिर TOILET लेखिँदमा त्यस घरमा कोही दिशा बस्न जाने होइन अनि पब्लिक शौचालयतिर TOLET लेखिँदैमा त्यहाँ दिशा बस्नु बाहेक भाड़ा माम्न कोही जाने होइन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, विशुद्ध अङ्ग्रेजी शब्द रङ्लिश (WRONGLISH) सित रङ्गालिएर जनमानसमाझ यति धेर हुलमिल भएको छ जसलाई आज अर्थको अनर्थ पार्दा पनि कुनै काम बिग्रेजस्तो लाग्दैन । यसकारण, अङ्ग्रेजी भाषा काम चलाऊको निम्ति मात्र प्रयोग गरिने साधन भएको छ हिजोआज ।
बङ्गाली जातिमा मान्छे मर्दा मलामीहरू "बलो हरि...हरि बोल्" भनी श्मशाहघाटतिर हिँड़ेका देखिन्छ । यही बङ्गला "हरि बोल्" शब्द HORRIBLE भई अक्सफोर्ड डिक्सनेरीमा वास पाएको छ । यो शब्द विशुद्ध बङ्गला शब्द भए पनि अथवा यसले अङ्ग्रेजी पगरी गुँथे पनि यो बङ्लिश (BONGLISH( नै हो । जति नै अङ्ग्रेजीको घुर्की देखाउन खोजे पनि हामी "हुनेवाला बुहारी" भन्छौं भने अङ्ग्रेजीमै "WOULD BE" भन्दा के हुन्छ र ? प्रणय सम्बन्ध भताभुङ्गै भएको खण्डमा "COULD BE" भनेर चलाउँदा हुँदैन र ! चल्छ किन चल्दैन ? सबै चल + ING = चलिङ । सबै चल + ABLE = चलेबल ।
हेनतेन नभनी लाजै पचाएर भन्नु हो भने, अन्तरराष्ट्रिय भाषाको पगरी गुँथी विश्वमा हुँड़ीबिड़ी मच्चाउने अङ्ग्रेजी भाषाले अब रङ्लिश (WRONGLISH) भएर तपाई-हामीलाई मात्र होइन मेकले र फ्रान्सिसहरूलाई समेत बूढ़ो औंली देखाइरहेको छ ।
सरी मेकले ।
सरी फ्रान्सिस ।।
सिलगढ़ी, उत्तर बङ्गाल, (भारत) ।